Isikhathi abadayisi ku Forex emakethe
I Bank of Asia, eMelika naseYurophu ukusebenza ngosuku abadayisi uqala at 7:30 am. Cishe isigamu sehora esichithwa ukuhlaziywa ngentuthuko yakamuva ye owedlule ukuhweba kweseshini. Abahwebi ukufunda cindezela bese survey kwezomnotho, ahlaziye umthelela izinkomba yamuva lokubalulekile lobuchwepheshe. Futhi, befisa ukuqoqa amahemuhemu salezo zikhulu kusuka kwezinye izinkampani, abahlaziyi baxoxisana izibikezelo ahlukahlukene kanye nokwaziswa lokushintshisana nomunye. Phakathi nale nkathi yokuba abahwebi usuku zama ukucabanga zonke izinguquko kungenzeka ku exchange rate. Ngezinye 8:00 ngenkuthalo kukhona ukuthengiselana kuqala. Ngalesi sikhathi, futhi, kunqunywa befisa ezimele amacebo akhe futhi baqala ukuvula izikhundla. Lokhu kukunika exchange rate push eqinile. On the Forex ukuhweba ubusuku nemini, ukuze kuye ngesikhathi ungabukela umsebenzi izimakethe emazweni ahlukahlukene.
Isikhathi abadayisi eliseMpumalanga Ekude iqala ebusuku futhi iqeda ngesikhathi sekhefu (GMT). Tokyo is isebenza kuze kube semini, futhi Singapore - ngaphambi kwasemini. iyehla iyenyuka zincane futhi ngokuvamile musa idlule amaphuzu 50. Iningi abathengisa elihlobene ne -dollar lase-Australia ne-yen.
befisa Russian ukuvala European emakethe, njengoba ku Zurich, Frankfurt, Luxembourg nesikhathi Paris abadayisi uqala at 9:00. Kodwa ngokuvumelana ukunyakaza asebenzayo uqale ngo 10:00 ekuseni, ngemuva ukuxhumeka ukuhweba London Stock Exchange. Sokuvuselela sithatha amahora mayelana 2-3. Bese kufika kwasemini isikhathi kanye nokushintshashintsha abohle ukuze 10-20 amaphuzu. emakethe okunjalo kwezinkolo kubizwa ngokuthi 'lifile.' Kuye isimo kungaba abe "emnandi". Khona-ke oscillations ongafinyelela kakhulu ngendlela 100 amaphuzu. Noma yimuphi abadayisi ngamazwe kumelwe ukuba wabona ukunyakaza efanayo izifundo.
Cishe 16:00 eMoscow ngenkuthalo uqale wabenza European. Xhuma ku-befisa e-US, ngoba isikhathi umthengisi of America iqala ngo nje kulesi sikhathi. Njengoba amabutho befisa European futhi aseMelika mayelana efanayo, ngokuvamile iyehla iyenyuka abeqeli ngalé nokuhamba kwezindikimba session European. Noma kunjalo, ngenxa wabenza kuyinto ukutholakala abalulekile kakhulu kwe-New York Stock Exchange, njengoba at 19:00 eMoscow amabhange European izovalwa, futhi amaMelika izohlala emakethe "nomzimba omncane" kuphela. Igcwele eqinile kwamanani okuhwebelana, njengoba zezimali ezinkulu exhumene nedola laseMelika. Simo esishubile kungenzeka 400-500 amaphuzu. On a emakethe ezinjalo "ukusinda" kuphela labo befisa okuyiwona Forex Ukuhweba akuyona umdlalo, kodwa kuwumsebenzi. A abadayisi kuzongisiza lokhu ukunyakaza kuphela ikhanda cool kanye yokuhweba uhlelo olucacile.
Futhi ekugcineni, ngikuthi fahla fahla Russian lwemali emakethe. He is ngokuphelele ezahlukene ezweni. Okokuqala ukuguqulwa imisebenzi ruble / dollar, okungathatha indawo emini. Ukuthengiselana zakhiwe izifundo ezimbili: namuhla (tod) futhi kusasa (tom). Eyokuqala ngaphambi kokudla, kanti eyesibili - emva. Kufanele kuqashelwe ukuthi eminye imisebenzi ku izinga lokushintshisana kwe-Izinga ruble / dollar has kuphela eRussia futhi eziphethe imakethe yomhlaba wonke baye cishe akukho nomphumela.
Inkomba best of ukwesekwa kanye ukumelana amazinga for MT4
Uyini ikusasa ngoba Brent okuhlambalazayo kanye Urals banga. uwoyela Trade ikusasa
Okukhethwa kukho kanambambili 24option: ukubuyekezwa. 24option: Izibuyekezo ezingezinhle
Siyakuhalalisela lokuzalwa Vadim. Yini ofuna?
Icala izindleko kutinchubo civil: izinhlobo kanye i-akhawunti yakhe
Ukuzibophezela emibonweni emandleni obukhosi ngekhulu xxi
Uyini ilimaze, futhi kanjani ngokushesha ayibulale?
Vest impungushe. Imithetho ukukhetha futhi lihambisana nezinye izinto ezihlobene ikhabethe